Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » 4 ka mid ah 5ta goobood ee xeebaha ugu fiican aduunka waxay ku yaalaan US
Wararka Brazil • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • dhaqanka • Entertainment • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • jiga • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
4 ka mid ah 5ta goobood ee xeebaha ugu fiican aduunka waxay ku yaalaan US.
Daraasadu waxay eegtay 100 xeebood oo aduunka ah waxaana lagu qiimeeyay arrimo ay ka mid yihiin cimilada, heerkulka badda, qiimaha huteelada, tirada makhaayadaha, iyo qiimaha baraha bulshada ee xeebta si loo ogaado xeebaha ugu fiican ee loo dalxiis tago.
Sidoo kale xeebta quruxda badan ee lafteeda, dib u eegida Copacabana waxay ku siinaysaa aragtida mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan aduunka oo ay isha ku hayaan taalada Masiix Bixiyaha.
Tirada makhaayadaha iyo baararka u dhow xeebta waa 11,153, waana inta ugu badan xeeb kasta oo liiska ku jira.
Afar xeebood oo Maraykan ah ayaa ka kooban 5ta xeebood ee ugu sarreeya, iyadoo Miami Beach ay qiimaynayso xeebta ugu fiican fasaxa Maraykanka iyo guud ahaan kaalinta labaad.
Iyada oo xeebaha samaynta qaar ka mid ah meelaha ugu caansan ee dalxiisayaasha Maraykanka, khubarada socdaalku waxay daaha ka qaadeen meelaha ugu wanaagsan ee fasaxa xeebaha ee adduunka.
Waxayna soo baxday in dadka Maraykanku aanay u baahnayn inay u safraan meel fog si ay u helaan xeeb aad u wanaagsan, maadaama afar xeebood oo Maraykan ah ay ku jiraan shanta ugu sareysa.
Top 10 xeebaha fasaxa adduunka oo dhan
Rank Magaca Xeebta Hashtags Instagram Tirada Makhaayadaha/ Baararka Celceliska Qiimaha Hoteelka ($) Celceliska Heerkulka (dhererka fog) Celceliska Roobabka Sanadka (mm) Celceliska Heerkulka Badda (dhererka fog) Dhibcaha Wadarta
3 Xeebta Venice, LA 4,200,000 10,578 $ 215.78 63.7 357 63.5 6.54
Xeebta Copacabana Brazil waxaa loo magacaabay xeebta ugu fiican fasaxa ee cilmi-baarista. Sidoo kale xeebta quruxda badan ee lafteeda, dib u eegida Copacabana waxay ku siinaysaa aragtida mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan aduunka oo ay isha ku hayaan taalada Masiix Bixiyaha. Tirada makhaayadaha iyo baararka u dhow xeebta waa 11,153, waana inta ugu badan xeeb kasta oo liiska ku jira. Intaa waxaa dheer, Copacabana dhibco fiican ayaa ka mid ah arrimo kale oo ay ku jiraan hoteelada, heerkulka hawada, iyo heerkulka biyaha.
Afar xeebood oo Maraykan ah ayaa ka kooban 5-ta xeebood ee ugu sarreeya, oo leh Miami Beach qiimaynta xeebta ugu fiican fasaxa ee US iyo kaalinta labaad guud ahaan. Xeebtan ayaa runtii ah mid loogu talagalay dadka saamaynta ku leh iyo isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada, maadaama ay ku urursatay 14.4 milyan oo hashtag ah Instagram-ka. Tani waxay la macno tahay in ay ilaa hadda tahay tan ugu badan Instagrammed xeebta, oo leh in ka badan 13.7 milyan hashtags ka badan xeebta celceliska. Xeebta kale ee Miami ayaa ku jirta kaalinta afraad, South Beach, taas oo aad ugu mahad celinaysa celceliska heerkulka hawada ee 75.9℉, xitaa way ka sii kululaataa badda iyada oo celcelis ahaan heerkulka biyaha ah 80.6℉.
Xeebta Venice ayaa gashay kaalinta saddexaad guud ahaan, iyada oo leh tirada labaad ee ugu badan ee makhaayadaha (10,578), iyo sidoo kale hashtagga afraad ee Instagram-ka ugu badan (4.2 milyan). Maaddaama ay sidoo kale ku taal aagga Los Angeles, Santa Monica Beach waxay leedahay dhibco la mid ah Venice Beach, sababta kaliya ee ay uga hooseyso (meel 5th) waxaa sabab u ah 3.76 milyan oo hashtags Instagram ka yar.